गोर्खा भर्ती खा,रेज गर्न वि’प्लव समुहको माग (हेर्नुहोस बिज्ञप्ति सहित),,र शेयर गर्नुहोस् ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
गोर्खा भर्ती खा,रेज गर्न वि’प्लव समुहको माग (हेर्नुहोस बिज्ञप्ति सहित),,र शेयर गर्नुहोस् !
काठमाडौं, असार । प्र,तिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहको (नेकपा)ले गोर्खा भर्ती खा,रेज गर्न माग गरेको छ । उसले आज एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै यसको तत्काल खा,रेजीको माग गरेको हाे । गोरखा रेजिमेन्ट अङ्ग्रेज साम्राज्यवा,द कालीन र नेपाली सामन्ती रा,णाकालीन सम्झैताको नि,रन्तरता भएको भन्दै विप्लव समुहले यसको खा,रेजी गर्न माग गरेको छ ।
तत्कालीन समयमा पैसा र चा,कडीका लागि युवाहरुलाई अर्काको देशका लागि ल,ड्न पठाउने चलन २१ औं सताब्दीमा पनि देशका लागि ल,ज्जास्पद र अ,पाच्य हुने विप्लव समुहको ठहर छ । भारतले चीनसँगको सी,मामा दुई पक्षका सै,निकबीच झ,डप भएपछि वि,दामा बसेका नेपाली गोर्खा सैनिकलाई बिदा क,टौती गरेर बोलाएको प्रसंग जोड्दै चीनबि,रुद्ध ल,ड्न नेपाली गोर्खाली सेना पठाउन लागेको भन्दै त्यसप्रति आ,पत्ति जनाएको छ ।
नेपाली नागरिकले कुनैमपनि देशको सेनामा भर्ती भएर अर्को देशकावि,रुद्ध यु,द्धमा भाग लिने कार्य स्वीकार्य नहुने विप्लव समुहको ठहर छ । बिज्ञप्तिमा दुई समान छिमेकीकाबीचमा नेपाल र नेपाली जनताका लागि अति सं,वेदनशील र ख,तरनाक रहेको भन्दै गोर्खा रेजिमेन्टलाई चीनसँगको यु,द्धमा प्रयोग नगर्न भारतलाई आग्रह गरिएको छ ।
विप्लब समुहले नेपाली युवाहरूलाई आफ्नो जन्मभूमिमा श्रम गर्न र भारतीय सेनामा भर्ती भएर भाडावाल ल,डाकु नबन्न अपिलसमेत गरेको छ । News 24 Nepal Tv
Previous सासू र नन्दले सिलौटाले हानेर अका’लमै अस्ता’इन २३ वर्षीया सुस्मिता,,भावपुर्ण श्रद्धान्जली।
Next चीन लक्षित ए’यरबेसमा भारतले बढायो लडा’कु वि’मान र हेलिक’प्टरको तै’नाथी…हेर्नुहोस् ।
28 mins ago मेचीमहाकाली संवाददाता